Ny fifindrana niala tao amin’ny Fosa Juniors nankany amin’ny Kaizer Chiefs atsy Afrika Atsimo efa tamin’ny taona 2018 no anton’io, izay ambaran’ny FIFA fa misy tsy fanarahan-dalàna. Efa nahazo rariny tamin’ny FIFA anefa izy tamin’izany fotoana izany rehefa nisedra olana maro. Voasazy tsy afaka hividy mpilalao ihany koa ny Kaizer Chiefs mandritra ny 2 taona. “Tiako ny milaza amintsika eto fa tsy manana tsiny velively izaho DAX amin'ity tantara ity. Tsy manala tena akory fa aleo tsipihiko tsara eto fa ny "mutation-ko" avy any amin'ny Fosa Juniors nankaty amin'ny Kaizer Chiefs de vita ara-dalàna, hoy izy. Taty aoriana be izaho sy ny agent-ko ankehitriny vao nahafantatra fa hay mbola nisy vola be tsy voaloa, hono, avy ao amin'ny Kaizer Chiefs mankany amin'ny Fosa Juniors. Raha ny tokony ho izy dia tsy misy idirako intsony izany satria aferan-dry zareo samy klioba saingy izao izaho no lasa lasibatra. Tsy miala andraikitra anefa na dia tsy mpilalaon’ny Kaizer intsony ny tenako satria efa vita fifindrana aty amin'ny Black Leopards fa tsy indramina intsony”, hoy i Dax. “Voaporofo izany satria raha tena nisy zavatra tsy nazava nataoko dia angamba fantatry ny maro fa tsy afaka ary tsy nantsoin'ny coach Nicolas DUPUIS tamin'iny CAN 2019 iny. Momba ny BAREA, dia « nifampiresaka izahay sy ny coach Dupuis ary efa fantany tsara daholo ny momba an’io dosie io ka tsy ho afaka hanao Barea ny tenako mandritry ny efa-bolana. Vonona ny hanefa adidy mandrakizay ho an'ny fireneko aho raha mbola misy ilana ahy ao amin'ny ekipam-pirenena », hoy ity mpilalaon’ny Barea ity. Manaiky ity fanapahan-kevitra manan-tantara ity ary faly satria ny marina no nandresy, hoy kosa ny Fosa Juniors. Manantena izahay fa tsy hisy intsony fifindrana tsy ara-dalàna tsy hosazin’ny lalàna mifehy izany. Misy lalàna sy fitsipika tokony hampahafantarina antsipirihany ny mpilalao sy ny mpankafy satria lasa adihevitra be hatrany ny tahaka izao.